Amathiphu wokwenza i-Gmail ngendlela oyifisayo futhi uthole okuningi kuyo | Izindaba zamagajethi
Amacebo okwenza ngokwezifiso i-Gmail futhi uthole okuningi kuyo
U-Ignacio Sala | | Amakhompyutha, Izifundiswa
Insizakalo ye-imeyili yakwa-Google, i-Gmail, yaqala uhambo lwayo emakethe ngo-Ephreli 1, 2004, kodwa kuze kwaba ngoJulayi 7, 2009, lapho insizakalo ishiye i-beta futhi bonke abasebenzisi abafuna, bangavula i-akhawunti ye-imeyili. Eminyakeni engu-3 kamuva yavula iMicrosoft (Outlook, Hotmail, Msn ...) njenge ipulatifomu yeposi esetshenziswa kakhulu emhlabeni.
Inani labasebenzisi elinalo njengamanje alaziwa, kepha uma sicabangela ukuthi sikwazi ukusebenzisa i-Android smartphone, kuyadingeka, uma noma i-akhawunti yakwaGoogle, uma singathola umbono wesilo esine-Gmail iba. Esinye sezizathu esivumele yena hlala umholi wemakethe, siyithola kunombolo enkulu yezinketho zokwenza ngokwezifiso nokusebenza okusinikezayo.
Esinye isizathu, sikuthola ukuhlanganiswa nezinye izinsiza ze-Google ezifana ne-Google Drayivu, i-Tasks, i-Google Amadokhumenti, i-Hangouts ... izinsizakalo zamahhala nazo ezisetshenziswa kakhulu emhlabeni wonke. Yize inani lezinketho i-Gmail esinikeza lona ngohlelo lokusebenza lwamadivayisi eselula libanzi kakhulu, lapho uma singathola okuningi kukho kunguqulo yedeskithophu.
Le nguqulo yedeskithophu, esebenza ngokuhlangana kahle nesiphequluli seGoogle Chrome (yonke into ihlala ekhaya), isinika inani elikhulu lezinketho, izinketho azitholakali kuzinhlelo zokusebenza zeselula, kepha lokho kungathinta ukusebenza kwesicelo salezi zinsiza, njengokuthumela ama-imeyili, ukwenziwa kwamalebula okuhlukanisa ama-imeyili esiwatholayo, kusetshenziswa izingqikithi ezingemuva ezenziwe ngezifiso ...
Uma ufuna ukwazi ifayela le- amaqhinga amahle kakhulu we-gmail Ukuze uthole okuhle kukho, ngikumema ukuba uqhubeke ufunda.
1 Shintsha isithombe sangemuva
2 Hlela ukuthumela
3 Hlela ama-imeyili akho ngamalebula
4 Khansela ukuthumela i-imeyili
5 Khansela okubhaliselwe
6 Impendulo ezenzakalelayo
7 Faka isiginesha yangokwezifiso
8 Dlulisa ama-imeyili
9 Khulula isikhala se-Gmail
10 Ubuningi bokuqukethwe
11 Ukubambezeleka kwesaziso se-imeyili
13 Sebenzisa i-Gmail ungaxhunyiwe ku-inthanethi
Shintsha isithombe sangemuva
Ukushintsha isithombe sangemuva se-akhawunti yethu ye-Gmail inqubo elula evumela ukuthi siyinikeze ukuthinta okuhluke kakhulu kunaleyo esiyithole ngokwendabuko. Hhayi nje kuphela ukuthi singasebenzisa ezinye zezithombe osinikeza zona, kodwa futhi singazisebenzisa noma yisiphi esinye isithombe esisigcinile eqenjini lethu.
Ukushintsha isithombe sangemuva, kufanele sichofoze kusondo legiya elisengxenyeni engaphezulu kwesokudla se-Gmail bese uchofoza kukhetho lwezihloko. Okulandelayo, kuzokhonjiswa zonke izithombe esingazisebenzisa ngemuva ku-akhawunti yethu. Ngezansi, sithola inketho yokulayisha isithombe kusuka kukhompyutha yethu ukusisebenzisa. Uma lokhu kuyicala lakho, kufanele wazi ukuthi ukulungiswa kwesithombe kufanele kufane nokuqapha kwakho sizokuvimbela ukuthi singabonwa namaphikseli njengama-cuffs.
Ngaphambi kokuhlanganiswa kwendabuko kokuhlelwa kwe-imeyili, sikwazile ukukwenza lokhu ngesandiso esisebenza njengentelezi. Kodwa-ke, lapho ubeka khona lokho ivumela ukuthi sihlele ukuthunyelwa kwe-imeyili ngokwemvelo susa konke okunye.
Ukuhlela ukuthunyelwa kwe-imeyili, kufanele sibhale i-imeyili, engeza umamukeli (aba) bese uchofoza kufayela le- umcibisholo waphansi ukhonjiswe eduze kwenkinobho Thumela ukukhetha usuku nesikhathi esifuna ukuthi i-imeyili yethu ithunyelwe ngaso.
Hlela ama-imeyili akho ngamalebula
Ukuhlela ama-imeyili usebenzisa amalebula kuyinto esondele kakhulu ekwakheni izinkomba kukhompyutha ukuhlela amafayela. Ngale ndlela, singawaqoqa wonke ama-imeyili ahambelana nomuntu ofanayo ngaphakathi kwifolda ukuze siwathole kalula. Lawa amalebula, ayaboniswa ohlangothini lwesobunxele kwesikrini, ngezansi nje Kokutholakele, Okufakiwe, Okuhlehlisiwe, Okubalulekile ...
Uma sesiwenzile amalebuli, kufanele sakhe izihlungi, uma singafuni ukuthi sihlukanise onke ama-imeyili esiwatholayo. Ngenxa yalezi zihlungi, wonke ama-imeyili esiwatholayo ahambisana nenqubo esiyisungulile, bazothola ngokuzenzakalela ilebula esilisethile.
Izindlela esingazisungula yilezi:
Uma sesisungule isihlungi, kufanele sazi ukuthi yisiphi isenzo esifuna ukusenza ngawo wonke ama-imeyili afaka leyo mibandela. Kulokhu, sifuna ukungeza ithegi yezindaba zegajethi. Kusukela manje kuqhubeke, womabili ama-imeyili ebesivele siwatholile nalawo esiwathola kusukela manje kuqhubeke, izokwengeza ngokuzenzakalela umaki wegajethi yezindaba.
Khansela ukuthumela i-imeyili
Ukubhala i-imeyili eshisayo akukaze kube kuhle, futhi kuncane kakhulu uma sikunikeza ukuthumela futhi nemizuzwana kamuva siyacabanga kabusha. Ngenhlanhla, i-Gmail isinikeza amandla okukhansela ukuthumela i-imeyili kuze kube yimizuzwana engama-30 ngemuva kokuthi ithunyelwe. Ngemuva kokuthi leso sikhathi sidlulile, akukho esingakwenza ngaphandle kokuthandaza.
Ukusetha isikhathi esiphezulu lapho singakhansela ukuthunyelwa kwe-imeyili, kufanele sichofoze igiya elisekhoneni eliphezulu kwesokudla futhi sifinyelele izilungiselelo. Ngaphakathi kwethebhu Okujwayelekile, sibheka inketho Hlehlisa ukuthunyelwa: Isikhathi sokukhansela ukuthunyelwa: futhi setha isikhathi esukela kumasekhondi ama-5 kuye kwangama-30.
Yize ngokomthetho, kuphoqelekile ukuthi yonke imilayezo ethunyelwa kakhulu, efana nezincwadi zezindaba, ifake inketho yokukwazi ukuzikhipha ohlwini, hhayi yonke ekhombisa leyo nketho ngokucacile nangokusobala. Ukwenza kube lula ngabo ukuyeka ukuthola ama-imeyili avela kuzinsizakalo esingazifuni, i-Gmail iyasivumela zikhiphe ohlwini ngqo ngaphandle kokuyicela ngezinye izindlela.
Uma uhlela ukuya eholidini, noma ukuthatha ikhefu lezinsuku ezimbalwa, kunconywa kakhulu ukuthi senze umshini wokuphendula i-Gmail usinike wona. Le sevisi inesibopho sokuphendula yonke imilayezo esiyitholayo ngombhalo esiwumise ngaphambilini, futhi nokungeza isihloko nesikhathi lapho i-Gmail uzophatha ukuphendula ama-imeyili ethu.
Futhi sinethuba lokuthi umyalezo wokuphendula othomathikhi uthunyelwa kuphela koxhumana nabo esibagcine ku-akhawunti yethu ye-Gmail, ukuze sigweme ukunikeza imininingwane eyengeziwe kubantu asinaye oxhumana naye njalo. Le nketho itholakala ngezinketho zokumisa ze-Gmail kanye nasengxenyeni Ejwayelekile.
Faka isiginesha yangokwezifiso
Ukusayina ama-imeyili akusivumeli nje kuphela ukuthi sizethule futhi sinikeze imininingwane yethu yokuxhumana, kepha futhi kusivumela ukuthi sengeze izixhumanisi eziqondile kwezinye izindlela zokuxhumana nathi. I-Gmail, iyasivumela dala amasiginesha ahlukile, amasiginesha esingawasebenzisa womabili lapho senza i-imeyili entsha noma lapho siphendula ama-imeyili esiwatholayo.
Lapho sakha isiginesha, singangeza nelogo yenkampani yethu, noma esinye isithombe, njengaleso osibona esithombeni esingenhla. Futhi singakwazi ukufometha umbhalo ekuthandeni kwethu kokubili kwifonti, njengosayizi wayo, ukulungiswa ... Le nketho iyatholakala ngaphakathi kwezinketho zokumisa i-Gmail, ngaphakathi kwesigaba esijwayelekile.
Njenganoma iyiphi insizakalo ye-imeyili ehloniphayo, i-Gmail isivumela ukuthi sithumele wonke ama-imeyili esiwatholayo kwenye i-akhawunti ye-imeyili, noma ama-imeyili kuphela ahlangabezana nenqubo elandelwayo ethile. Ukusungula imibandela, ngaphakathi kwenketho yokudlulisela phambili, kufanele sichofoze ukudala isihlungi bese simisa, njengakulebuli, imibandela okumele ihlangabezane nama-imeyili ukuze idluliselwe kukheli esilifunayo.
Khulula isikhala se-Gmail
I-Gmail isinikeza u-15 GB wesitoreji samahhala sawo wonke amasevisi asinika wona njenge-Gmail, i-Google Drayivu, Izithombe ze-Google ... Uma imvamisa sithola ama-imeyili amaningi anokunamathiselwe, I-Gmail ingenye yezinsizakalo ezithatha isikhala esiningi. Ukukhulula isikhala, singasebenzisa umyalo "size: 10mb" (ngaphandle kwezilinganiso) ebhokisini lokusesha ukukhombisa wonke ama-imeyili ahlala ku-10 MB. Uma esikhundleni sokubhala u- "size: 20mb" (ngaphandle kwamamaki wokucaphuna) wonke ama-imeyili ahlala ku-20mb azokhonjiswa.
Ngokuzenzakalelayo, i-Google isinikeza umbono we-akhawunti yethu ye-imeyili ekhombisa ukuthi ama-imeyili abandakanya noma yiluphi uhlobo lokunamathiselwe nokuthi luhlobo luni. Uma sithola ama-imeyili amaningi ngesikhathi sosuku futhi asifuni ukuba nokubuka konke kuwo wonke, singakwazi shintsha ubukhulu bokuqukethwe okubonisiwe. Le nketho iyatholakala ngaphakathi kwe-cogwheel, esigabeni sokuminyana kokuqukethwe.
I-Gmail isinikeza izinketho ezintathu: Okuzenzakalelayo, esisikhombisa ama-imeyili nohlobo lokunamathiselwe, Uyaduduzeka, lapho wonke ama-imeyili akhonjiswa ngaphandle kokunamathiselwe futhi Icwebile, idizayini efanayo nombono weCompact kodwa yonke into isondelene ndawonye, ​​iqina.
Ukubambezeleka kwesaziso se-imeyili
Impela ezikhathini ezingaphezu kwesisodwa, uthole i-imeyili okufanele uphendule ngoyebo noma yebo, kepha akuphuthumi. Kulezi zimo, ukugwema ukuyikhohlwa, singasebenzisa inketho yokuhlehlisa. Le nketho, susa umyalezo we-imeyili ebhokisini lethu lemilayezo engenayo (itholakala kuthileyi elihlehlisiwe) naku- izokhonjiswa futhi ngesikhathi nasosukwini esilusungulile.
I-Gmail isinikeza izihlungi ezinamandla ukugwema i-SPAM, noma kunjalo, kwesinye isikhathi ayikwazi ukuthola wonke ama-imeyili kahle. Uma sikhathele ukuthola ama-imeyili ahlala evela ekhelini elifanayo le-imeyili, i-Gmail isivumela ukuyivimba ngqo ukuze wonke ama-imeyili abasithumela wona avele ngqo kudoti wethu. Ukuvimba umsebenzisi, kufanele sivule i-imeyili bese sichofoza amachashazi amathathu aqondile ekugcineni kwekheli le-imeyili bese ukhetha ibhulokhi.
Sebenzisa i-Gmail ungaxhunyiwe ku-inthanethi
Uma imvamisa sisebenza nge-laptop, kungenzeka ukuthi ngezikhathi ezithile zosuku, singatholi ukuxhumana kwe-inthanethi. Kulezi zimo singasebenzisa i-Gmail ngaphandle koxhumano lwe-inthanethi, umsebenzi lowo itholakala kuphela uma sisebenzisa iGoogle Chrome. Le nketho inesibopho sokusivumela ukuthi sibhekabheke ama-imeyili akamuva futhi siwaphendule ngqo kusuka kusiphequluli njengokungathi sinokuxhumeka kwe-inthanethi. Ngokushesha nje lapho sixhuma kwi-intanethi, izoqhubeka nokuthumela ama-imeyili esiwabhalile noma sawaphendula.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izifundiswa » Amacebo okwenza ngokwezifiso i-Gmail futhi uthole okuningi kuyo
Ungazirekhoda kanjani izingcingo zakho zevidiyo